गठबन्धनको सरकारमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नै सकस, अधिकांश मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन « Image Khabar
Imagekhabar १० श्रावण २०७८, आईतवार १९:४८
काठमाडौं, साउन १० । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई हप्तासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा आलोचित बन्नु परेको छ । आजै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीसहित छ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बने पनि सिंहदरबारमा रहेका अधिकांश मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।
देउवाको नेतृत्वमा असार २९ गते ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको हो । आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थपिएपछि यो संख्या ६ पुगेको छ । यो सरकारले पाँच वर्षमा बाँकी रहेको समय सत्ता सञ्चालन गर्न पाउने गरि विश्वासको मत संसदबाट पाइसकेको अवस्था छ । आखिर गठबन्धनको सरकार विस्तारमा बाधक को हो त ? मन्त्रालय नमिलेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भएको राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बताउनुहुन्छ ।
जसपा कुनै आस्था वा विचारका लागि नभएर पदका लागि सरकारलाई सार्थ दिएको राजनीतिक विश्लेषक डा. चापागाईले बतानुहुन्छ ।
पाएको सत्ता व्यवस्थापन गर्न नसकेर गठबन्धन सरकार आलोचित भयो भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि गरिएका प्रहार आत्मघाती भएर आफैंतिर फर्कने निश्चित छ ।